Ukuhlolwa kwelebhu - Hebei Shenli Rigging Co., Ltd.
Izikhungo zokuhlola ze-Hebei Shenli zifakiwe ukwenza ukuhlolwa kwempahla eluhlaza kanye nayo yonke imikhiqizo esiyenzile. Ukuze sigcine indawo yayo emakethe ngokuya ngezinto ezisezingeni eliphakeme, izivivinyo bekufanele zenziwe ngokuqhubekayo. Izinto ezilinganisiwe zivivinywa ngamaketanga wokumboza, izingwegwe, izixhumanisi, amasilingi, ama-tie-downs, i-chain block, i-lever block, i-snatch block nemishini efanayo.
I-shenli isazi isidingo sokuqashelwa kwezindawo zayo zokuhlola ezivunyelwe yi-CNAS (China National Accreditation Service for Conformity Assessment) nayo yonke imikhiqizo yethu kufanele ihlolwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi ikhwalithi yamukelekile kuwo wonke amakhasimende ethu.
I-Quaity Control Procudure / uhlelo lwethu lumi kanje:
1. Izinto zokwakha
Konke okuqukethwe kwethu kungukuhlinzekwa nguhulumeni, sizoba nombiko wokulandela umkhondo wenqwaba ngayinye yento, Iqoqo ngalinye lolo daba lwenziwa nge-ID yalo futhi lo mbiko uzoqhubeka phakathi nawo wonke umkhiqizo. --- Lokhu kusho ukuthi sazi kahle ukuthi yimaphi ama-batch material akhiqizwe kwimikhiqizo yokugcina futhi sizogcina leli rekhodi isikhathi esingaphezu kweminyaka emihlanu.
2. Ukutshalwa Kwemikhiqizo Okuphelile:
Okokuqala, sizocubungula ngokuhlolwa komhlaba okungu-100% okuncike kakhulu kubasebenzi abanesipiliyoni besebenzisa igeji yokukhulisa kanye nesikhulisi;
b. Ngemuva kwalokho, sizocubungula into nge-100% yokuthola i-magnaflux crack ukubheka ukuthi kukhona yini ukukhubazeka ebusweni ngaphakathi;
c. Lapho-ke into yethu izofika esinyathelweni sokugcina sokuhlolwa kobulukhuni ngokuqina kokuqina ukuqinisekisa ukuthi ihlangabezana namazinga emikhiqizo ethile.
3.Ukuqedwa Kotshalomali Lomkhiqizo:
a. Okokuqala kungu-100% wokutshalwa komhlaba okuphezulu nokwelashwa kwendawo; b) Okwesibili kuza esivivinyweni sokuqina kokuqina kwemishini ngemishini ehlukene yokuqina kokuqina;
b. Ekugcineni ukuhlolwa kokuqina kokukhathala kwemikhiqizo yeBanga lesi-8 nakho konke ukuhlolwa kuzolandela imibiko futhi kugcinwe kurekhodi iminyaka emi-5.
4. Ukupakisha okuhle
Ekugcineni, inkampani yethu izobheka iphakethe ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ngamabhokisi, ama-logo kanye nama-pallet. Okwamanje, sizothumela zonke izithombe kumakhasimende ethu ukuze sizisize zazi isimo sezimpahla.
AbakwaShenli basiqaphela isidingo sokuqashelwa kwezindawo zokuhlola ezivunywa yi-CNAS (China National Accreditation Service for Conformity Assessment) nayo yonke imikhiqizo yethu kufanele ihlolwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi ikhwalithi yamukelekile kuwo wonke amakhasimende ethu.
1.Izinto ezisetshenziswayo-- Yonke impahla yethu ingukuhlinzekwa nguhulumeni, sizoba nombiko wokulandela umkhondo wenqwaba ngayinye yempahla futhi lo mbiko uzoqhubeka phakathi nawo wonke umkhiqizo. --- Lokhu kusho ukuthi sazi kahle ukuthi yimaphi ama-batch material akhiqizwe kwimikhiqizo yokugcina futhi sizogcina leli rekhodi isikhathi esingaphezu kweminyaka emihlanu.
2.Semi-Finished Imikhiqizo utshalomali:
Ukutshalwa Kwezimali Okuqediwe:
a.Okokuqala kukho konke ukutshalwa kwemali okuyi-100% ukwelashwa okuphezulu; b) Okwesibili kuza esivivinyweni sokuqina kokuqina kwemishini ngemishini ehlukene yokuqina kokuqina;
b) Ekugcineni ukuhlolwa kokuqina kokukhathala kwemikhiqizo yeBanga lesi-8 futhi konke ukuhlolwa kuzolandela imibiko futhi kugcinwe kurekhodi iminyaka emihlanu.
4.Kokugcina, inkampani yethu izobheka iphakethe ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ngamabhokisi, ama-logo kanye nama-pallet. Okwamanje, sizothumela zonke izithombe kumakhasimende ethu ukuze sizisize zazi isimo sezimpahla.
Sizokwazisa amakhasimende ethu bese sibhuka ukuthunyelwa.